Ozugbo ị kpebiri iji ya | Ota Ward Hall Hall Aplico
Mgbe ị na-eji nnukwu ụlọ nzukọ, obere ọnụ ụlọ, na ụlọ ngosi
Ma ọ bụ mgbe ị na-eji akụrụngwa na ntụrụndụ ahụ elere anya na ọ dị mkpa na njikwa ụlọ ọrụ ahụ, na atụmanya nke otu ọnwa tupu ụbọchị eji eme ihe dị ka iwu izugbe ị ga-eweta akwụkwọ ndị a, biko gaa na ode akwụkwọ na nzukọ.
Mmemme ma ọ bụ eserese na-aga n'ihu, mpempe akwụkwọ, atụmatụ nchekwa, tiketi nnabata ma ọ bụ tiketi agụrụ (dị ka ihe atụ)
Na mgbakwunye na nke dị n'elu, ihe omume na nnukwu ụlọ nzukọ gụnyere eserese ogbo, ihe osise ọkụ, na eserese na-adọrọ adọrọ.
Mgbe ị na-eji ihe nkiri ahụ
A gaghị ere ngwaahịa na studio
Iji oku, wdg. Ngalaba Mgbochi Mgbakọ Ọkụ Kamata
2-28-1 Kamatahoncho, Ota-ku Ekwentị: 03-3735-0119
Nche wdg. Ogige ndị uwe ojii Kamata
2-3-3 Kamatahoncho, Ota-ku Ekwentị: 03-3731-0110
Izipu mgbasa ozi / ọkwa
Biko mee ka anyị mata ma ọ bụrụ na ị chọrọ biputere a signboard.
N'ụbọchị eji, biko gosi akwụkwọ nnabata iji were anabata ụlọ tupu i bido ime ụlọ ahụ.
Enwere ụlọ ụmụaka na ala mbụ.Ọ bụrụ na ịchọrọ iji ya, biko gwa ndị ọrụ.Biko jikwaa ya n'akụkụ onye ọrụ.
Mgbe ejiri ya, biko weghachite ihe eji eme ihe na steeti mbụ.Na mgbakwunye, biko jide n'aka na ị ga-ewere ihe nke aka gị ma hapụ ha n'ime ebe ahụ.
Na ụkpụrụ, ọ bụrụ na akụrụngwa ma ọ bụ akụrụngwa ahụ mebiri emebi ma ọ bụ furu efu, a ga-achọ ka ị kwụọ ụgwọ maka mmebi ahụ.
Biko jiri ebe a na-adọba ụgbọala na-esi ísì ala (oke ịgba 2.1 m).
Onye nhazi ahụ ga-akwụ ụgwọ n'efu maka ebe a na-adọba ụgbọala n'ụbọchị ahụ, mana enwere ọnụ ọgụgụ nke ụgbọ ala dabere na ụlọ ọrụ ahụ.
A na-akwụ ụgwọ ebe ọ bụla na-adọba ụgbọala maka ndị ọrụ izugbe.
Ime ụlọ ịwụ nwere ọtụtụ ebe a na-anọ oche oche dị na 1st na 1st ala ala na nnukwu ụlọ nzukọ (1st floor).
Ọ bụrụ na i si n’okpuru ebe a na-adọba ụgbọala banye, biko jiri igwe mbugo.